ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ အမှု့ကိုနှောင့်နှေးသွားအောင် သတင်းအမှားတွေလွှင့်ပြီးမနှောက်ယှက်ဖို့ တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ သားဖြစ်သူ ကြည်သာဌေးလွင် – Cele Oscar
ပရိတ်သတ် ကြီးရေ…ပြည်သူချစ် အနုပညာရှင် တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ သင်္ကြန်မိုး မင်းသားကြီး ဦးဇင်ဝိုင်း ဟာဆိုရင် လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ နိုင်ငံအရေး အခြေအနေတွေ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမှန်တရား ဘက်က ရဲရဲ ဝင့်ဝင့် ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ သူတစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်။လူထု လှုပ်ရှား မှုမှာ တက်ကြွစွာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ဦးဇင်ဝိုင်း ကို ပုဒ်မ ၅၀၅(က) ဖြင့် ဖမ်းဝရမ်း ထုတ်ခဲ့ပြီး ပီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းမှာ ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခံ လိုက်ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိ မှာ ဆိုရင်လဲ အဆိုတော် ယုန်လေး ရဲ့ သတင်း အမှား ထုတ်လွင့်မူ ကြောင့် ဦးဇင်ဝိုင်း ရဲ့ အမှု ကိစ္စမှာ အခက်အခဲ တွေ့နေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်.။သတင်းမှား လွှင့်ခဲ့တဲ့ အခြေအနေ တွေ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဦးဇင်ဝိုင်း ရဲ့ သားဖြစ်သူ ကြည်သာဌေးလွင် က အခုလိုပဲ မေတ္တာရပ်ခံ လာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်…။” အခုအချိန်ထိ အဖေ ကျန်းကျန်း မာမာ ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်း ကြားတာက လွဲပြီး ဘာအဆက် အသွယ်မှ လုံးဝ မရပါဘူး။ တကယ်လို့ ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ ရှိတယ်ဆိုရင်တောင် နှောင့်နှေး စေအောင် မနှောင့် ယှက်ဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်”လို့ သူ့ရဲ့လူမှု ကွန်ယက် စာမျက်နှာကနေတစ်ဆင့် ရေးသားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပရိတ်သတ် ကြီးက လည်း ဦးဇင်ဝိုင်း တစ်ယောက် အန္တရယ်ကင်းစွာ နဲ့ အမြန်ဆုံး ပြန်လည် လွတ်မြောက် လာအောင် ဆုတောင်း ပေးကြ ပါအုံးနော်…. ။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ တစ်ယောက်ချင်း စီတိုင်းကို လည်းအထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်…။
ပရိတျသတျ ကွီးရေ…ပွညျသူခဈြ အနုပညာရှငျ တဈယောကျ ဖွဈတဲ့ သင်ျကွနျမိုး မငျးသားကွီး ဦးဇငျဝိုငျး ဟာဆိုရငျ လကျရှိ မွနျမာနိုငျငံမှာ ဖွဈပျေါနတေဲ့ နိုငျငံအရေး အခွအေနတှေေ နဲ့ ပတျသကျပွီး အမှနျတရား ဘကျက ရဲရဲ ဝငျ့ဝငျ့ ရပျတညျခဲ့တဲ့ သူတဈဦးပဲ ဖွဈပါတယျနျော။လူထု လှုပျရှား မှုမှာ တကျကွှစှာ ပါဝငျခဲ့တဲ့ ဦးဇငျဝိုငျး ကို ပုဒျမ ၅၀၅(က) ဖွငျ့ ဖမျးဝရမျး ထုတျခဲ့ပွီး ပီးခဲ့တဲ့ ရကျပိုငျးမှာ ဖမျးဆီး ထိနျးသိမျးခံ လိုကျရတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
လကျရှိ မှာ ဆိုရငျလဲ အဆိုတျော ယုနျလေး ရဲ့ သတငျး အမှား ထုတျလှငျ့မူ ကွောငျ့ ဦးဇငျဝိုငျး ရဲ့ အမှု ကိစ်စမှာ အခကျအခဲ တှနေ့ရေတာပဲ ဖွဈပါတယျ.။သတငျးမှား လှငျ့ခဲ့တဲ့ အခွအေနေ တှေ နဲ့ ပတျသကျပွီး ဦးဇငျဝိုငျး ရဲ့ သားဖွဈသူ ကွညျသာဌေးလှငျ က အခုလိုပဲ မတ်ေတာရပျခံ လာတာပဲ ဖွဈပါတယျနျော…။” အခုအခြိနျထိ အဖေ ကနျြးကနျြး မာမာ ရှိနတေယျဆိုတဲ့ သတငျး ကွားတာက လှဲပွီး ဘာအဆကျ အသှယျမှ လုံးဝ မရပါဘူး။ တကယျလို့ ပွနျလှတျပေးဖို့ ရှိတယျဆိုရငျတောငျ နှောငျ့နှေး စအေောငျ မနှောငျ့ ယှကျဖို့ မတ်ေတာရပျခံပါတယျ”လို့ သူ့ရဲ့လူမှု ကှနျယကျ စာမကျြနှာကနတေဈဆငျ့ ရေးသားခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ပရိတျသတျ ကွီးက လညျး ဦးဇငျဝိုငျး တဈယောကျ အန်တရယျကငျးစှာ နဲ့ အမွနျဆုံး ပွနျလညျ လှတျမွောကျ လာအောငျ ဆုတောငျး ပေးကွ ပါအုံးနျော…. ။ ဖတျရှုပေးတဲ့ တဈယောကျခငျြး စီတိုငျးကို လညျးအထူးပဲ ကြေးဇူးတငျရှိပါတယျ…။